Dabaaldeg laga mamnuucay Yuhuudda Masar | Qaran News
Writen by Qaran News | 10:58 am 27th Sep, 2020
Yuhuudda Masar ayaa laga mamnuucay u dabbaaldegidda munaasabadda…….
Sawir muujinaya Yuhuud dabbaaldegeysa
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukun kama dambeys ah ka soo saartay mamnuucidda dabbaaldegga dhalasho ee wadaadka Yuhuudda ee “Abu-Xasira”, oo sannad walba lagu qabto mid ka mid ah tuulo ku taalla dalka ee Masar.
Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in qabrigii uu ku aasnaa wadaadka Yuhuudda ee Abu-Xasiirah in laga saaro liiska waxyaabaha qadiimiga ah ee Islaamka iyo Qibdiyiinta ee dalka Masar, waxayna maxkamaddu diidday codsiga ay Yuhuudda u soo gudbisay ee ahaa in meydkiisa loo wareejiyo Israa’iil.
Xukunki kan ka horreeyey waxaa lix sana ka hor soo saartay Maxkamadda Alexandria.
Maamulka sare ayaa diidday racfaanki loo soo gudbiyay iyada oo dowladda Masar ay codsatay in xukunki hore ee maxkamadda Alexanderia uu u noqdo mid kama dambeys ah.
Maxkamadda Alexanderiya ayaa 2014-kii soo saartay go’aan ay ku mamnuuceyso macbadka Abu Xasiira iyo qabuuraha Yuhuudda ee ku hareereysan oo ku yaalla tuulada Demetioh ee gobolka Buxeyriya, oo horay uga mid ahaa liiska waxyaabaha qadiimiga ah ee Islaamka iyo Qibdiyiinta ku nool dalka Masar ay leeyihiin isla-markaana go’aanka maxkamadda la gaarsiiyo Hay’adda Waxbarashada, Saayniska iyo Dhaqanka ee Qaramada Midoobay (UNESCO) lagana hortago dabbaaldegga dhalashada Abu-Xasiira ee ay Yahuudda sanadwalba u dabbaaldegto.
Maxkamaddu waxaa kale oo ay xukuntay inaan la oggolaan in naxashka ama lafaha Yuhuudda hore ee ku aasan dalka Masar inaan Israa’iil loo wareejinin isla-markaana si dhab ah loo aqoonsado Quddus iney tahay dhul dulmi lagu haysto lagana fogaado dowladda dulmiga caadeysatay ee Israa’iilna in loo aqoonsado dal madax bannaan.
Garyaqaan maxkamadda go’aanka gaartay ka mid ah ayaa gudbiyey dacwad ah in la joojiyo dabbaaldegga dhaalshada Yuhuudda ay dhigtaan ee Abu-Xasiira, iyada oo Yuhuudda dabbaaldeggaas horay looga oggolaaday iney ku qabsadaan Tuulada Damitouh, waxaase go’aankan dambe keenay marki ay dadka Yahuudda ee munaasabaddaasi u dabbaaldega ay tiradooda badatay.
Dadka ku nool tuulada ay Yuhuudda dabbaaldeggaas ku qabsadaan ee Damitouh waxay arrintaasi u arkeen mid ka horimanayo anshaxa guud ee bulshada halkaasi ku nool.
Garyaqaan ayaa gudbiyay dacwad si loo joojiyo dabaaldegga dhalashada Abu-Xasira, oo Yuhuudda loo oggolaaday inay ku qabsadaan tuulada Damitouh, ka dib markii ay sii kordheen tirada dadka u dabaaldegaya, iyo cibaadooyinka ay dadka tuulada deggan u arkeen inay ka soo horjeedaan anshaxa guud iyo diimaha ay dadka kale aaminsan yihiin.
Abu-Xasiira waa kumaa?
Abu-Xasiira wuxuu ahaa wadaad Yuhuud ah oo hoggaamiyeyaashooda ruuxiga ka mid ah waxaana magaciisa la odhan jiray Yacquub bin Mascuud wuxuu ka soo jeedaa dalka Morocco oo uu ku noolaa qarniga sagaalaad iyo tobanaad.
Qoyska Abu-Xasiira uu ka dhashay oo ahaa mid aad u badan waxay u kala haajireen waddama kala duwan oo ay ka mid yihiin Masar iyo dalal kale.
Qaar ka mid ahna waxay ku nagaadeen ilaa iyo haddaba isirkooda uu ku dambeeya dalka Morocco, iyada oo dadka aminsan diinta Yuhuudda ay qoyskaasi u arkaan kuwa ‘barakeysan’.
Dabbaaldegga dhalashada Abu-Xasiira waxay soo billaabatay 1907-dii iyada oo sanad walba ay Yuhuuddu xusto inta u dhaxeysa 26-ka December ilaa iyo 2-da Jannaayo iyaga oo xuskana ku qabsado macbad ay Yuhuuddu leeyihiin oo ku yaalla tuulada Demitouh oo gobolka Buxeyriya ka tirsan ee dalkaasi Masar.
Boqollaal Yuhuud ah oo ka kala yimaadda dalalka Morocco, Faransiiska iyo Israa’iil ayaa qabriga Abu-Xasiira u arko goob ay u soo xajiyaan oo sanad kasta halkaasi yimaadda.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa 2001-dii dabbaaldeggaasi mamnuucday, hase yeeshee mas’uuliyiinta dowladda Masar waxay marki dambe oggolaadeen in dabbaaldeggaasi sanadki mar la qabto wixi ka dambeeyey 2010-kii.
Wixi ka dambeeyey kacaanki 2011-kina ma jirin wax barnaamijyo ah ama booqashooyin qabri ama dabbaaldegyo ah oo halkaasi ka dhacay maadaamaa shacabka deggan goobaha dabbaaldegyada sanadlaha lagu qabanayey ay diideen.
Waqtigaasina, Masar waxay Israa’iil ku wargalisay dhibaatada ay leedahay qabashada dabaaldegga, “iyadoo la tixgelinayo duruufaha dalka Masar xilligaasi uu marayey.”
Go’aankan maxkamadda Masar ayaa imanaya toddobaadyo un kadib markii la kala saxeexday laba heshiis oo dib looga soo celinayo xidhiidhka u dhexeeya Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Israa’iil, halka ay wararku intaasi ku darayaan inay suurtagal tahay in xiriirka ka dhaxeeyo Suudaan iyo Israa’iil-na uu caadi ku soo noqdo.